Maxay Soomaaliya ka baran kartaa wadaxaajoodka Taliban iyo dowladda Afqanistan? | Gaaroodi News
Maxay Soomaaliya ka baran kartaa wadaxaajoodka Taliban iyo dowladda Afqanistan?
Wadahadaladii rasmiga ahaa ee ugu horeeyya ee u dhaxeeya dowladda Afqanistaan iyo kooxda Taliban ayaa lagu wadaa in maanta ay ka bilaabmaan caasimada dalka Qadar ee Doxa.
Maxay Soomaaliya ka baran kartaa wadaxaajoodka Taliban
“In la raadiyo dowlad saddexaad oo ay xafiis ka furan karaan, hadda Taliban waxa lagula hadlayaa Dooxa waayo marnaba kuma aaminayaan wadanka gudihiisa ” ayuu yiri Dr Tiir.
“Inkastoo ay ka midaysan yihiin Taliban iyo xarakada Shabab dhanka is qarxinta haddana waxay ku kala duwan yihiin fahamka guud, dowladnimada iyo sida loo dabaqayo shariicada islamka ” .ayuu yiri Dr Axmed Tiir.
“Waxay leeyihiin(Taliban) arrin ku dhamaanaysa siyaasadda, marka nimankaas wax badan ayaa lagala xaaltami karaa, oo waa niman lala hadli karo, laakiin nimankan Al-Shabaab waxay u muuqdaan in aanay lahayn dano siyaasadda ku dhamaanaya ” ayuu yiri